By Madaxtooyadda Soomaaliya
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale amar duldhigay taliska ciidamada Asluubta.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xoojinaya dadaallada ku aaddan ka hortagga cudurka Koroona ayaa Cafis Madaxweyne u fidiyey 148 maxbuus oo u xukunnaa dambiyo fudud.
Qurba-joogtan, oo ka kala yimid Waqooyiga Ameerika, Yurub i ...
Kal-fadhiga 5aad ee Gollaha Shacabka BF oo maanta furmaya
Soomaliya 27.03.2019. 07:54
Jeesow: Xayiraada hubka ayaa caqabad ku ah tayeynta ciidamada Somalia
Soomaliya 06.02.2019. 10:13
Madaxweynaha Somalia oo shir gudoomiyay Shir ka dhacay Muqdisho [Sawirro]
War Saxaafaded 03.02.2019. 23:54